Warar – Banaadir Times
Home Archive by category Warar
By banaadir 11th July 2021 No comment
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa Muqdisho dib igu soo laabtay ka dib socdaal 4 cisho qaatay oo uu ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarrey ee dowlad-goboleedka Jubaland. Socdaalka Ra’iisul Wasaare Rooble ee Jubaland ayaa diiradda saarayay arrimaha hirgelinta doorashooyinka, dib u heshiisiinta, xoojinta amniga iyo fulinta mashaariic horumarineed oo wax
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Mudane Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) ayaa u jaawabay beesha Murusade oo dhowaan soo saartay digniin ku aadan rag siddeed ah oo ay Puntland ku xukuntay dil toogasho ah. Sanyare oo ka qeyb-galayey munaasabad gaar ah oo ka dhacday Mudug ayaa shaaca ka qaaday in dadka u doodaya xukumanayaasha ay soo […]
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xalay ku hoyday magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo ku aadan u jeedka socdaalkiisa. Rooble ayaa si gaar ah u qaabilay odayaasha dhaqanka ee degmada Garbahaarey, wuxuuna marka hore ka dhageystay warbixin ku aadan xaaladda magaaladaasi iyo sida looga gudbi karo
By banaadir 10th July 2021 No comment
Ra’sul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo, halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen maamulka iyo shacabka degmadaas. Rooble ayaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubaland, halkaas oo uu wadahadallo kula lahaa madaxweynaha
Taliyaha Booliiska Gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa lala eegtay qarax, waxaana taliye oo Goordhaw la hadlay Warbaahinta Shabelle uu sheegay in qaraxa lala beegsaday gaarigiisa. Taliye Farxaan Qaroole ayaa Shabelle u xaqiijiyey in uu ka badbaaday qaraxaasi, islamarkaasina uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa ayaa sigaar ah kaga dhacay isgooska Banaadir ee Muqdisho.